Guiyang Zhongshuge Ny Fivarotam-Boky - Famolavolana
Ny Fivarotam-Boky Miaraka amin'ireo lalantsara miendrika tendrombohitra sy trano fitehirizam-bokotra gractto dia manolotra ny mpamaky ao amin'ny tontolon'ny lava-bato Karst. Amin'izany fomba izany, ny ekipa mpamolavola dia mitondra traikefa an-tsary mahafinaritra nefa mandritra izany fotoana izany dia manaparitaka ireo toetra sy kolontsaina ao an-toerana amin'ny vahoaka marobe lehibe kokoa. Guiyang Zhongshuge dia endrika sy kolontsaina an-tanàn-dehibe ao an-tanànan'i Guiyang. Ankoatr'izay dia mametaka ihany koa ny hantsana amin'ny tontolon'ny kolontsaina ao Guiyang.
Anaran'ny tetikasa : Guiyang Zhongshuge, Anaran'ny mpamorona : Li Xiang, Anaran'ny mpanjifa : X+Living.
Ny Fivarotam-Boky Li Xiang Guiyang Zhongshuge